लकडाउनमा धमाधम बन्दै नाटकघर « epurwa
लकडाउनमा धमाधम बन्दै नाटकघर
प्रकाशित मिति : २९ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १४:२४
दमक, जेठ २९ । झापाको दमक दर्शक नाटक हेर्न असाध्यै रुचाउँछन् । दमकमा कहिलेकाहीँ प्रदर्शन हुने नाटकमा दर्शकको भीडले पनि यो प्रमाणित गर्छ । तर, नाटकघर छैन । नाटक देखाउनकै लागि कलाकारले यहाँ रहेका सामुदायिक भवन तथा होटलका हलहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । रेडक्रस, माडवारी सेवा समितिको हल लगायत सामुदायिक भवन प्रशस्त छ । निजी होटलका हल पनि छन् । तर, यी थिएटरमैत्री छैनन् । अभावै अभावका बीच पनि दमकमा आकल झुकल नाकट प्रदर्शन हुन्छ । प्रदर्शन भएका नाटकमा हलले थेगिनसक्ने गरी दर्शक हुन्थे । दमकका दर्शकको नाटकप्रतिको भोक मेट्न तीन वर्ष अघि स्थापना भयो, कदम थिएटर । जसको नेतृत्व गरे, ८० बढी चलचित्रमा अभिनय गरेका पुराना कलाकार हेमन्त बुढाथोकीले ।
थिएटर गठन भयो । सबैतिर चर्चा पनि भयो । तर, उनीहरूमाथि दमकमा निरन्तर नाटक प्रदर्शन गर्नु दबाब थियो । सुरुवाती समयमा कलाकारको अभाव त थियो नै त्यो भन्दा ठूलो अभाव नाटक देखाउने ठाउँको थियो । यही अभावका बीच थिएटरले दुईवटा ठूला पर्दाको नाटक तयार पनि प¥यो । नाटक मरिचेको चुप्पीको इलाममा भएको राष्ट्रिय नाट्य महोत्सव र गैडा टाइम्स काठमाडौंमा भएको अन्तराष्ट्रिय नाट्य महोत्सवमा प्रदर्शन भयो । ‘थिएटर स्थापन भएपछि दमकमा ३५ कलाकार उत्पादन गरियो । जसमध्ये १७ फुल टाइमर छन्’, थिएटरका कला संयोजक सिजन दाहाल भन्छन्, ‘हामीले दुईवटा नाटक ग¥यौँ । बाँसको टहराले बनाएको एउटा हल बनाएका छौँ । यसमा बाछिटा नाटकको तयारी गर्दै थियौँ । लकडाउन भयो ।’
थिएटरलाई दमक नगरपालिकाले दमक–९ मा पाँच कठ्ठा जग्गा भोगाधिकार दियो । उक्त जग्गामा सानो टहरा बनाइएको छ । त्यो टहरामा यसअघि प्रदेश–१ स्तरीय कार्यशालदा पनि भयो । अब बर्खासँगै खोलाले नाटघरभित्र रहेका सामान बगाउने त्रास पनि छ । तर, त्राससँगै अर्को खुसी छ, थिएटरले आफ्नै सुविधा सम्पन्न नाटक घर बनाउँदैछ । नगरपालिकाले भोगाधिकार दिएको जग्गामा प्रदेश–१ सरकारले बजेट विनियोजन गरेपछि नाटकघर निर्माण सुरु भएको छ । लकडाउनको बीचमा नै नाटकघर निर्माण थालिएको छ । सात करोडको डिपिआरसहित निर्माण सुरु गरेको ‘सेउपाखा बहुसांस्कृतिक नाटकघर’ प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६० लाख विनियोजन गरेर काम भइरहेको थिएटरका महासचिव तथा निर्माण उपभोक्ता समिति अध्यक्ष मोहन ढुंगाना (मेचीपुत्र)ले जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकारकोरातो किताबमै योजना परेको छ । वर्षैपिच्छे गरे भए पनि काम हुन्छ । तर, यस वर्ष कम्तिमा एउटा भवन सकौँ भन्ने छ । जसले नाटकको गर्न सकिथ्यो भन्ने हो’, उनले भने, ‘एक करोड ८० लाखमा एउटा भवन सक्नुपर्ने छ । प्रदेशको बजेटले मात्र सकिँदैन स्थानीयस्तरमा पनि जुटाइरहेका छौँ ।’
झापालाई राजधानी बाहिर नाटकको ‘हब’ बनाउने लक्ष्य सुनाउँछन्, थिएटरका अध्यक्ष हेमन्त बुढाथोकी । कलाकार बन्न काठमाडौं जाने बाध्यताको अन्त्य गर्न पनि थिएटर स्थापना गरिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले कलाकार बन्न काठमाडौं नै जानुपर्ने बाध्यता थियो । थिएटरले यसको अन्त्य गर्छ । दमकमा अन्य साहित्यिक गतिविधिको पनि हब हो’, उनले भने, ‘नाटक कम हुन्छ । तर, भएका नाटकमा दर्शक धेरै हुन्छन् । अर्थात् नाटकमा दर्शकको भोक छ । त्यो मेटाउन पनि थिएटर स्थापना गरेका हौँ ।’
कदम थिएटरले बनाएको उक्त थिएटरमा सेउपाखा बहुसांस्कृति नाटकघरमा नाटक मात्र हुँदैन । यहाँ कला र साहित्यका सम्पूर्ण गतिविधि गर्ने तयारी छ, कदम थिएटरको । ‘यो थिएटरको भवनमा साहित्य र कलाका सम्पूर्ण गतिविधि हुन्छ । राम्रा सिनेमा देखाउँछौँ पनि । नेपाली सिनेमाको समीक्षा पनि यहीँ गर्छौँ’, अध्यक्ष बुढाथोकीले भने, ‘हाम्रो एउटै उद्देश्य भनेको दमकमा नियमित नाटक प्रदर्शन गर्नु नै हो ।’
नाटक घरको नाम किन ‘सेउपाखा बहुसांस्कृति नाटकघर’ ?
कदम थिएटरले बनाउँदै गरेको नाम किन ‘सेउपाखा बहुसांस्कृति नाटकघर’ रहन गयो ? आम चासोको विषय छ । पूर्वी नेपालमा बस्नेबाहेकले ‘सेउपाखा’ को अर्थ बुझ्दैनन् । सेउपाखा धिमाल भाषाबाट उत्पति भएको हो । सेउपाखा यसको अर्थ नमस्कार गर्नू वा स्वागत गर्नू भन्ने हुन्छ । दमक धिमाल जातिको उद्गम थलो हो । दमक नगरपालिकाले धिमाल जातिलाई नगरको प्रथम नागरिक पनि घोषणा गरेको छ ।
‘दमक’ नाम पनि धिमाल जातिबाटै उत्पति भएका कारण थिएटर हलको नाम नै ‘सेउपाखा बहुसांस्कृति नाटकघर’ राखिएको थिएटरका सचिव कमन देवानले बताए ।
‘रंगमञ्चले संस्कृतिको संरक्षण पनि गर्नुपर्छ । दमक धिमाल जातिको आदि थलो हो । हामीले आदिवासीकै नामबाट भवनको नाम राख्न खोजेका थियौँ । अध्ययन गर्ने क्रममा सेउपाखा नै राखियो’, उनी भन्छन्, ‘टिकट काटेर नाटक हेर्न थिएटरसम्म आउने दर्शकलाई स्वागत सम्मान गर्न पनि यही नाम उपयुक्त लाग्यो ।’ उक्त थिएटर भवनमा अन्य जातिको पनि पहिचानज झल्कने सामग्री राखिने सचिव देवानले बताए ।